Yini umatilasi wasentwasahlobo kahle emuva | Rayson | Rayson
Okubaluleke kakhulu, bonke bangakwazi ukuba nezidleke kalula lapho zingasebenzi ukusebenzisa inani elincane lesikhala esiphansi. Amatafula abeside noma amatafula aseceleni kombhede acishe abhekwe njengesigaba sodwa, kepha namanje ahlobene kakhulu namatafula aseceleni, ajwayele ukusebenzisa amafomu afanayo nosayizi. Kodwa-ke, ukungezwa okujwayelekile etafuleni eliseceleni kombhede kuyinto ekhabethe elilodwa noma ngaphezulu elinikezela indawo yangasese yokugcina zonke izinto ezincane ozidingayo embhedeni wakho.
Ngenxa yeminyaka yentuthuko kubuchwepheshe bedijithali, izinsiza ezizwakalayo zedijithali manje zinikeza ukuqonda ngesimo sayo esincane, esingama-esingu-Esinamandla esiletha impilo kubasebenzisi okuhlangenwe nakho okuhlukile kunezakhi eziningi ezahlukene ezakha abanzi - lezi zokwakha zidlala a indima ebalulekile ekwakheni kwanamuhla. Izinto ezijwayelekile zifaka amatshe amatshe, isihlabathi kanye ne-anxa0among ezinye izinto, kukhona i-slag.
Ekugcineni baphumula. Abanye abantu abahamba ngezingcingo baxoxa ngempilo futhi banikeze ukuxhumana nomhlaba wangaphandle. URreenwood waxhumana nomunye wabafowabo; Kuvela ukuthi le kholi isiginali ebaluleke kakhulu ekucindezelekeni kweLafeng. U-Yvonne Budoro uhlala ngaphandle kwe-Atlanta. Kungakapheli amahora angama-35, uzophatha imisebenzi engeke iphothulwe yiliphi iqembu likahulumeni noma iqembu lokutakula.
Ungawathola kanjani ama-memory foam entwasana matilanti we-free